वाम एकतामा दर्जन अड्चन, यस्तो गुट बन्ने देखियो !
काठमाडौं, २६ पुस । गत मंसिरमा आमनिर्वाचन सम्पन्न हुनुअघि प्रेमी प्रेमिकाको स्तरमा एक भएका नेकपा एमाले र माओवादीबीच अहिले पार्टी एकीकरण हुन निकै सकस परिरहेको छ ।
केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति र सभामुख पद चाहिने र पार्टी एकता गर्न आफूलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने सर्त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राखेपछि वाम गठबन्धनका रुपमा मोर्चाबद्ध भएको एमाले–माओवादी एउटै पार्टीमा रुपान्तरित हुन कठिन भइरहेका दबाब र प्रचण्डलाई अर्कोतिरबाट प्राप्त अफरलाई मात्र आधार बनाइयो भने अब यी दुई पार्टीबीच एकता हुने विश्वास गर्न सकिँदैन ।
केपी ओलीमाथि पार्टी अध्यक्ष पद सम्पूर्ण रुपमा नछोड्न दबाब पारिरहेको छ भने प्रचण्डलाई पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बनाइराखिने प्रस्ताव अर्कोतिराबाट गएको छ । यतिखेर प्रचण्ड जतापटि फर्किए पनि लाभ पाउने स्थितिमा छन् तर केपी ओली भने अलिक अप्ठ्यारोमा परेको देखिँदै छन् ।
प्रचण्डको हातमा सम्पूर्ण पार्टी सुम्पिँदा त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने अप्ठ्यारोप्रति केपी ओली सचेत देखिएका छन् । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलगायतका नेताहरुले प्रचण्डप्रति दर्शाएको हमदर्दीले ओलीलाई झनै झस्काएको छ ।
प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी प्रमुख बनाएर आफू प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ र वामदेव गौतमलगायतले सरकार प्रमुखको रुपमा काम गर्न अनेकौं अड्चन पैदा गर्न सक्ने सम्भावना पनि ओलीले देखेको बताइन्छ ।
अहिले माधव नेपाल र उनका समर्थकहरुले कसरी एकता गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा खुलेर प्रकट गरिरहेका छैनन् । प्रचण्ड अध्यक्ष पद नपाईकन एकता नगर्ने पक्षमा रहेको र केपीलाई पद हस्तान्तरण गर्न दबाब दिँदा अन्यथा अर्थ लाग्ने भएकोले पनि माधव समर्थकहरुले मौनता कायम राखेका हुन् ।
तर पार्टी एकता भइसकेपछि भने माधव नेपाल र उनका समर्थकहरु आक्रामक ढंगले सक्रिय हुन सक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । आफ्नो हातबाट पार्नी नेतृत्व जाने र सरकार प्रमुखको रुपमा पनि राम्रोसँग काम गर्न नपाइने स्थिति बन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा आफू सकसमा पर्न सक्नेतर्फ ओली सचेत रहेको उनका निकटवर्तीहरुको भनाइ छ ।
उता प्रचण्डमा भने एकपटक पार्टी एकता भएर आफू कार्यकारी प्रमुख बनियो भने उक्त पार्टीलाई स्थायी रुपले आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिने विश्वास भएको बुझिन्छ । प्रतिकूलतालाई आफू अनुकूल बनाउन सक्ने क्षमता प्रचण्डमा रहेको सबैले बुझेका छन् ।
ज्ञातव्य छ, प्रचण्डलाई विधि र प्रक्रियाअनुरुप चल्ने नेताका रुपमा बुझिँदैन । वन म्यान शोमा उनको विश्वास र व्यवहार छ र एमालेको नेतृत्व हात पार्न सफल भएमा त्यहीभित्र नेताहरुबीच खेलेर उनले एमालेका नेताहरुलाई हायलकायल बनाइरहन सम्भव छ ।
प्रचण्डको यो सोच र चरित्रलाई केपी ओलीले राम्रोसँग बुझेका हुनाले अध्यक्ष पद प्रचण्डलाई सुम्पन गाह्रो भएको हो । आफ्नै पार्टीका नेताहरुको नियतमा खोट भएको ठानेर नै ओली प्रचण्डलाई पार्टी जिम्मा लगाउन सचेत भएका हुन् ।
तर, जुन पक्षको नियत जस्तोसुकै भए पनि र जो जति सचेत रहे पनि एकीकरण प्रक्रियाबाट भाग्न सक्ने पक्षमा दुवै पक्षका नेताहरु छैनन् । एकतामा जानैपर्ने या नजाने भए पनि पार्टी एकताका पक्षमा रहेको देखाउनैपर्ने बाध्यता दुवै कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुमा छ ।
त्यसैले दुवै पक्ष कार्यदल बनाएर एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहमत (कि बाध्य ?) भएका छन् । कार्यदलले पार्टी एकताको मोडल बनाउँदा सरकारको स्वरुप तथा पार्टीको दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरुको हैसियतसमेत तय गर्ने भएको छ ।
यस्तो गुट बन्ने देखियो
प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी प्रमुख नबनाउन अध्यक्ष केपी ओलीमाथि दबाब बढिरहेको भए पनि एमालेका सबै वरिष्ठ नेताहरु प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाएर पार्टीमा भित्र्याउन हतारिएका छन् । वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउन हतारिएका हुन् ।
पार्टी एकता भएमा उक्त पार्टीभित्र केपीविरुद्ध बलियो मोर्चाबन्दी हुने संकेत वरिष्ठ नेताहरुको हतारोले देखाएको छ । दुई पार्टीको एकतापछि प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, अमृत बोहोरा, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल, कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल र वर्षमान पुन, रवीन्द्र अधिकारी, प्रभु साह र मातृका यादवलगायतका नेताहरु एकातिर हुन सक्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरुबाट हुन थालेको छ ।
त्यस्तै केपी ओली, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, टोपबहादुर रायमाझी, शंकर पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, भानुभक्त ढकाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रामेश्वर फुँयाललगायतका नेताहरु अर्कोतिर रहने अनुमान छ । यदि यस्तै किसिमले पार्टीभित्र टिम बन्ने हो भने केपी ओलीका निम्ति एकतापछिका दिनहरु कष्टपूर्ण हुन सक्ने देखिएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वसँग अनौपचारिक भेटवार्ता गरेर बार्गेनिङ गर्न थालेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो सुरक्षाका निम्ति विकल्प तयार गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सम्बद्ध सूत्रबाट प्राप्त सूचनाअनुसार ओली र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच प्रारम्भिक तहको सहमति बनेको छ ।
कुनै कारणवश प्रचण्डले धोखा दिएमा वा माओवादीसँग पार्टी एकता हुन नसकेमा यादव नेतृत्वको फोरमसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने विकल्प ओवलीले तयार गर्नुभएको हो ।यस सन्दर्भमा नेता यादवसँग विभिन्न स्तरमा पटक पटक कुराकानी भएको र कुराकानीका क्रममा यादवले उपराष्ट्रपति सभामुख र उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री माग्नु भएको समाचार सूत्रहरुले जनाएका छन् ।
त्यस क्रममा एमाले नेतृत्व यादवलाई उपराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री दिन तयार भएको र सभामुखको बारेमा सकारात्मक भएको बताइएको छ । तर, एमालेले सभामुख आफैंसँग राखेर उपसभामुख उपेन्द्र यादवलाई सुम्पने सम्भावना ज्यादा छ ।
यसरी यादवसँग एमाले नेतृत्वले एक तहको समझदारी बनाएको भए पनि माओवादीसँगको कुराकानी नटुंगिईकन यादवसँगको समझदारी सम्झौतामा रुपान्तरित हुने स्थिति भने छैन । एमाले र माओवादी नेतृत्वले सरकार गठन र पार्टी एकतालाई सँगसँगै अघि बढाउन अन्तिम कसरत गरेका छन् ।
प्रचण्डको प्राथमिकता पार्टी एकता (आफू अध्यक्ष बन्ने कुरा) र केपी ओलीको प्राथमिकता सरकार गठन भएपछि दुईपक्षबीच सरकार गठन र पार्टी एकता प्रक्रिया सँगै अघि बढाउने सहमति बनेको छ । त्यस निम्ति दुवै पक्षले कार्यदल गठन गरी अघि बढ्ने आवश्यक गृहकार्य पनि सुरु गरिसकेका छन् ।
प्रचण्डले राष्ट्रपति, सभामुख र पार्टी अध्यक्ष पद मागेका भए पनि एमाले नेतृत्व माओवादीलाई उपराष्ट्रपति र सभामुखसम्म दिने मानसिकतामा रहेको बुझिन्छ । यतिबेला सरकार गठन र पार्टी एकताका निम्ति कार्यदल बनाएरै गृहकार्य सुरु गरिएको भए पनि शतप्रतिशत विश्वासको स्थिति बनिसकेको छैन ।
एमालेसँग कुरा नमिलेमा कांग्रेस र मधेसकेन्द्रीत समूहहरुसँग गठबन्धन बनाउने भित्री योजनामा प्रचण्ड रहेजस्तै प्रचण्डले धोखाधडी गरेमा उपेन्द्र यादवसँग गठबन्धन गर्ने विकल्पमा जान केपी ओलीले आवश्यक वातावरण बनाउनु भएको छ ।
यादवसँग गठबन्धन बनाउँदा एमालेले धेरै गुमाउनु नपर्ने र यादवलाई पनि धेरै ठूला उपलब्धि हासिल हुने भएकोले दुवै पक्ष एक अर्कासँग सहकार्य गर्न इच्छुक र उत्सुक भएका छन् । यादवले एमाले नेतृत्वसँग मधेस समस्याको समाधान गर्ने विषयमा सकारात्मक बन्ने गरेको आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताइन्छ, घटना र विचारमा उल्लेख छ ।
केपी ओलीले मधेसमा उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गरिने वचनसमेत यादवलाई दिनुभएको छ । तर दुवै वाम पार्टीको नेतृत्वमाथि एकता गर्न तीब्र दबाब परिरहेको हुनाले अन्ततः एमाले र माओवादीका नेताहरु एकीकृत पार्टी निर्माण गर्न बाध्य हुने स्थितिमा छन् । त्यसैले एमाले फोरम सहकार्य अहिले नै सतहमा आउने सम्भावना देखिएका छैन ।